Booliska oo lagu cambaareeyay hubsiimo la’aan | Somaliska
Booliska magaalada Göteborg ayaa lagu cambaareeyay in ay si hubsiimo la’aan ah dad ugu soo xireen shaki argagixiso bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Warbixintaan oo ay baaritaan ku sameysay idaacada Sverige ayaa lagu sheegay in haweenay jahwareersan hadalkeeda dadka lagu soo xiray.
Dhacdadaan ayaa dhacday bishii Oktobaar xili ay aroor hore tahay ka markii boolis fara badan ay xaafadaha labo qoys u dheceen iyaga oo raggii oo aan dhar xirneyn dhulka dhigay oo katiinadeeyay iyo haweenay. dadkaas oo lagu haystay in ay qorshaynayeen weerar ka dhan ah goobta laga adeegto ee Nordstan.
Xabsiga dadkaan ayaa ka dambeeyay ka dib markii boolisku ay wareysi la yeesheen haweeney sheegtay in ay maqashay dadkaan qof ka mid ah oo telefoon ku hadlaya isagoo ka hadlayay weerar bambo oo lagu qaado goobta laga adeegto. Booliska ayaa sheegay in hadalka haweeneyda uu yahay mid lagu qanci karo balse warbixinta idaacada ayaa midaas shaki galisay.
Haweeneyda ayaa la sheegay in ay hadalo badan oo iska soo horjeeda ku hadashay, sida in markii hore ay sheegtay in ninka uu ahaa nin afrikan madow oo timo adag, iyadoo ka dibna sheegtay in uusan ninku madoobayn ee uu ahaa nin cad oo aan tima adkeyn.
Si kastaba ha ahaatee, dadkii la soo xiray ayaa mudo 24 saac ka dib la sii daayay iyaga oo aan wax dacwo ah loo raacan waqtigaas ka dib. Booliska laftiisa ayaa lagu bilaabay baaritaan in ay si qaldan dadka u soo xireen iyadoo dacwadaas xitaa la joojiyay.
Dhacdadaan ayaa waxay tusaale u tahay dhacdooyin badan oo booliska Sweden lagu eedeeyo in ay si hubsiimo la’aan ah dadka u soo xiraan. Booliska ayaa dhinacooda ku doodaya in hadalka haweeneyda uu yahay mid lagu qanci karo oo ay ka hortagayeen in qasaare weyn uu dhaco.
Waalidiin lagu xukumay xabsi ka dib dil sharafeed